DAAWO:- Guddiga Doorashooyinka Puntland iyo Siyaasiyiin Caan ah oo kulan aan cadi ahayn isugu yimid. | Wararka Khaatumo , Somaliland , Puntland Iyo Somalia
Guddiga doorashooyinka ku meel gaarka ah ee Puntland (TPEC), ayaa maanta xafiiskooda kulan kula qaatay, xubno ka tirsan siyaasiyiinta Puntland oo qaarkood hore xilal uga soo qabteen Puntland iyo dowladda Federaalka Soomaaliya.
Af-hayeenka guddiga doorashooyinka ku meel gaarka ah ee Puntland, Cabdinuur Sheikh Maxamed Isxaaq oo markii kulankaasi dhammaaday saxaafadda uga warbixiyay, ayaa sheegay in guddigu siyaasiyiinta ay la kulmeen ay u bandhigeen hawlaha u qabsoomay iyo qorshayaasha u degsan, si loo hirgeliyo barnaamijka xisbiyada badan ee loo xilsaaray.
Waxa kale oo uu sheegay, in siyaasiyiintu ay talooyin la xiriira hirgelinta barmaamijka xisbiyada badan, ay la wadaageen guddiga, islamarkaana ay talooyinkaasi u arkaan kuma muhiima u ah shaqada guddiga, isagoo uga mahadceliyay siyaasiyiinta ra’yigooda ay ku biiriyeen
Previous articleDAAWO:- Somaliland oo cabsi soo wajahday kadib markii somalia ay soo iibsatay Hub culus “Deymaha DFS laga Cafiyay oo iyana hinaas dhaliyay”.
Next articleRwanda waxay mamnuucday aalad dhibaato kuhaysay dalal badan oo kuyaal Africa.